प्राप्चामा जस्तापाताले ल्याएको खुशी(फोटोफिचर) – Nepal Japan
नेपाली समय : 08:23:36
जापानी समय : 11:38:36
प्राप्चामा जस्तापाताले ल्याएको खुशी(फोटोफिचर)
6 June, 2015 10:36 | क्षेत्रीय समाचार , पत्रपत्रिका | comments | 123300 Views
ओखलढुंगा/गाविसमार्फत आएको एउटा पालको भरमा थियो, प्राप्चा ८ का ५४ बर्षीय कुलप्रसाद भटराईको परिवार । त्यसलाई पनि राती आउने बर्षात र हुरीबतासले उडाउला झै गर्छ । बर्षा र हुरीबतास आउदा रातभर कोही पनि निदाउनै सक्दैनन् । सरकारले जस्ता दिन्छ भन्ने सुनेका छन्, तर महिनादिन बित्यो, जस्तापाता आएन् । जस्ता पाए छानो हालेर बलियो टहरा बनाउने उनको योजना पुरान हुन पाएन । तर, तीन दिनअघि जस्तापाता लिन आउनु भन्दै अचानक उनलाई खबर आयो । उनी हतारिदै पुगे । एक बण्डल जस्ता, तार र २ वटा म्याट पनि पाउदा खुशीको सिमा रहेन ।‘त्रिपाल च्यातिन थालेको थियो, जस्ता पायौं, अब छानो ठोक्छुँ’–कुलप्रसादले भने ।
उनलाई यो खुशी धरानबाट गएका युवाहरुको टिमले दिलाएको थियो । राज्यले विस्थापित परिवारलाई जस्ता पाता पुर्याउन नसकेको बेला धराने युवाहरुको टिम सेभ नेपालले प्रत्येक परिवारलाई एक बण्डल(९ पाता) जस्ता लिएर गएको थियो । यो टिमले केउरेनीका ४५ र घले डाँडा मुनिका १० मगर परिवारलाई जस्ता वितरण गर्यो । धरानका युवा साथीभाई र विदेशमा रहेकाहरुबाट सहयोग जुटाएर विस्थापित परिवारलाई जस्तापाता सहयोग गरेको टिम लिडर राजेश लिम्बूले बताए । ‘भुकम्प र पहिरोले विस्थापित परिवारलाई जस्तापाताको खाँचो छ भन्ने सुन्यौं, यहाँ आएर हेर्दा साँच्चै उहाँहरु समस्यामा पर्नुभएको रहेछ’–उनले भने ।
स्थानीय शिक्षक एवं समाजसेवी टोलहरी पोख्रेलका अनुसार जिल्लामा नै पहिलो पटक जस्तापाता प्राप्चा गाविसको विस्थापित परिवारले पाएका छन् । धराने युवाहरु स्वतस्फुर्त जुटेर सहयोग गर्न आउदा गाउँलेहरु ज्यादै खुशी भएको उनले बताए । ‘कुनै एनजिओ, क्लब पनि होइन रहेछ, तरपनि यति टाढाबाट हाम्रो समस्या बुझेर युवाहरु आफै जुटेर आउनुभएको रहेछ, यो सबैको लागि अनुकरणीय छ’–उनले भने–‘एउटा परिवारलाई छानो हाल्न मजाले पुग्छ, बारबेरा त हामी आफै गर्नसक्छौँ नि ।’
चित्रा र सेउलाको भरमा विस्थापितहरु:
बैशाख १२ गतेको भुकम्पले प्राप्चा ९ केउरेनीकी लिलामाया मंग्रातीको घर बस्नै नहुने गरी क्षति पुग्यो । भत्किएकै घर नजिक टहरा बनाएर बस्न खोजेपनि वस्ती माथिको डाँडा खस्ने घरले सकेनन् । उनको ६ जनाको परिवार प्राप्चा ६ स्थित दाहाल गाउँमा शरण लिन आए ।
यता त आए तर घरखेत केही थिएन । कहाँ, कसरी बस्ने ? यो चिन्ताले निक्कै पिरोल्यो । अन्त्यमा स्थानीयको जग्गा ठेक्कामा लिएर लिलामायाको परिवारले टाउको लुकाउने अस्थायी टहरो बनाए । जग्गावालासँग कमाएर अन्न दिने, नभए मासिक ३ हजार पैसा बुझाउने सर्त रहेको उनले बताइन् । जग्गाको व्यावस्था भएपछि चित्रा, सेउला हालेर उनीहरुले बस्ने टहरा तयार गरे । ‘घरै रहेन, अर्काको जग्गामा आयौं । रात कटाउनलाई भएपनि चित्रा र सेउलाले टहरो बनायौं’–७२ बर्षीय लिलामायाले भनिन् ।
लिलामाया त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । प्राप्चा वडा ८ र ९ बाट विस्थापित ४५ घरपरिवारमध्ये अधिकांशले बाँसको चोयाबाट बनेको चित्रा र सेउला हालेर टहरो बनाएका छन् । महाभुकम्प र पहिरोको डरले विस्थापित भएको निक्कै दिनपछि राज्यकोतर्फबाट एउटा त्रिपाल त पाए, तर त्यसले बर्षासँगै आएको हावाहुरी थेग्नै नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । राज्यले विस्थापितहरुलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्थासहित जस्तापाता वितरण गर्ने भनेको सुनेपति यहाँका पीडितहरुले सरकारी राहत पर्खन सकेनन् । अधिकांशले सुरक्षित ठाउँमा गएर जग्गा कमाइदिने, अन्न दिने वा पैसा तिर्ने भन्दै भाडामा लिएर टहरा बनाइसकेका छन् । ‘राज्यले एउटा पाल र कम्मल त दियो, तर त्यसले कहाँ पुग्छ ? हावाहुरी, पानी पर्दा विजोग भयो’–पुष्पराज मंग्रातीले भने–‘जस्तापाता पनि दिने रे, तर कहिले हो ? बर्खा लागिसक्यो, त्यसैले पर्खनै सकेनौं ।’
केउरनी बस्तीका केही परिवार मात्रै बेसीमा भएको आफ्नै जग्गामा सरेका छन् । केही हुनेखानेले मात्रै आफ्नै पैसामा जस्ता ल्याएर सुरक्षित टहरा बनाएका छन् । अधिकांश विपन्न र दलित परिवारको भने उठिबास छ । उनीहरु अर्कै सुरक्षित वडामा कमाएर अन्न दिने वा पैसा दिने सर्तमा जग्गा लिएर टहरो बनाएका छन् । ‘एक महिना बितिसक्यो, राज्यबाट त्रिपाल, कम्मल र एक बोरा चामल मात्रै पायौं । मैले पनि १२ सय रुपैया दिने र काम सघाउने भनेर यो जग्गामा टहरो बनाएको हुँ’–प्राप्चा ९ बाट विस्थापित प्रेम मंग्रातीले भने–‘जसरी पनि बाच्नु त पर्यो नि ।’
केउरेनीबाट विस्थापित ४५ घरमध्ये २० दलित परिवारलाई प्रशासनले प्राप्चा ३ स्थित देउरालीमा अस्थायी शिविर बनाएर राख्ने तयारी गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि जस्तापाता अभावले टहरो पुर्ण हुन सकेको छैन । घले डाँडाको पहिरोको खतराबाट विस्थापित १० मगर परिवार पनि चर्किएको घर छोडेर विस्थापित छन् । उनीहरुले पनि चित्राको टहरा बनाएर बसेका छन् । ‘हाम्रो घर २९ गतेको भुकम्पले चिरा चिरा पार्यो, घले डाँडा पनि खस्न लागेकोले घरबार छोडेर हिड्यौं’–चित्राले बारेको टहराअघि उनले भनिन्–‘अब बर्खामा त्रिपाल ओढेर कसरी बस्नु ?’